トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Endri-javatra - jereo ny alalan 'ny lalana mankany amin'ny onjan-ROM dia tezitra vanim-potoana
Ao amin'ny pachinko efi-trano, no mihevitra fa tezitra matetika sehatra tsara indrindra. Raha tsy izany, satria ho lasa tsy manana pachinko varotra ny trano izy. In, tahaka ny hafahafa famarana parlors pachinko toy izany isika, dia hampiditra ny fomba hahita ny alalan 'ny tezitra latabatry ny endri-javatra.
dia vao nahatakatra avy hatrany fa raha mijery.
tezitra latabatra ny endri-javatra tsara indrindra dia ny hoe na inona na inona lasa mampiankin-doha noho ny lalina kokoa. Rehefa 1000 andro sy mahatahotra no misy ao amin'ny Zara koa hijoro ho ialana ny in-2000. Ao anatin'ny ROM amin'ny fotoana toy izany ny toe-javatra, miteny, ohatra, dia ny toetra, toy ny efa roulette sy miverina imbetsaka fomba tezitra.
ihany koa ny hiverina any amin'ny fiainana ara-dal?na, ary afaka matetika ho ela. Tezitra fotoana, dia ho ny tsy-panjakana rehetra, Mino aho fa somary mora takarina. Tsy tsara amin'ny fotoana tahaka izao, dia ny isan'ny Miseho ny famokarana dia mihena tanteraka.
ao amin'ny vanim-potoana ara-dal?na, fa ny famokarana hiseho foana tsy, ho tezitra fe-potoana, ny famokarana mihitsy no lasa sarotra ny hiala. Ny vokany dia eny, nivoaka takatry fampisehoana, hifarana tsy ho ela isika, tsy misy fampandrosoana.
Ankoatra izany, raha efa nakatona ihany nony farany ny jackpot, na ho tonga ny farany ao amin'ny iray monja, dia natao na ho tonga ny farany ao amin'ny fanintonan'ny-miverina tsy mbola ary mety fiovaovana na dia indray mandeha ao amin'ny ora fiasana fohy kokoa. Avy eo, dia ho levona avokoa ny nandrasana hatry ny ela nivoaka ny boaty, ilaina ihany koa ny efa lasa ny fampiasam-bola. Avy eo, dia hitranga ny bisikileta na masiaka Manomboka doha. Ho mikoriana ny endri-javatra amin'ny vanim-potoana tezitra.
ao amin'ny efi-trano, satria ratsy toy izany ny toe-latabatra matetika no tsara indrindra, mihevitra aho fa izaho koa amin'ny be dia be ny tsara indrindra namely traikefa ianao amin'ny toy izany faladiany. Na izany aza, tsy misy dikany ho fantatra rehefa nandona aho. Ratsy indrindra dia miandry mikoriana, toy izany ny aretina mikoriana dingana efa tapa-kevitra ny ho tsara kokoa ny mahafantatra eo anoloany mamely. Amin'ny
Izany no ilaina ny manana angona robo sy ny tahirin-kevitra mifanohitra. vinaingitra tahirin-kevitra Jereo ny jiro sary sy mazava tsara ny fiainana tezitra-mety ho tapa-kevitra. Data ny latabatra izay eo amin'ny vanim-potoana toy izany slump, Sary, ataoko fa ambany lavitra ny tsipika afovoany. Koa satria tezitra
ny fiainana dia ratsy jackpot mety ho ela latabatra, miezaka hijery miaraka. Ankoatra izany, ny sehatra izay efa tonga amin'ny endri-javatra toy izany tezitra-fiainana, misy fotoana izay fanahy iniana indray milina tao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko.
na fotsiny no hany tsy maintsy slump mikoriana, Heveriko fa tsara ny mamaritra misy ilaina izany raha satria nanao ny fanarenana milina. Na dia izany aza, fa tsy be nanaraka ny fandikan-teny dia tezitra vanim-potoana.
izay tonga amin'ny dingana aretina toy izany ny endri-javatra, ao amin'ny raharaha izay efa nanaraka ny andro vitsivitsy, nihevitra ihany koa izany mba hanohy hifindra ho any amin'ny ara-dal?na ny fiainana sy ny vanim-potoana tsara. Rehefa efa lasa fironana fiakaran'ny no tsikelikely kisary, heveriko fa ny tanan 'handre ny fomba miezaka kely hira ny hanandrana. Raha misy
mahita amin'ny alalan'ny mafy teo amin'ny sisin-tanin'ny mahery avy amin'ny vanim-potoana amin'ny fiainana tezitra-teknolojia, Iza no koa mety ho olona iray ihany no Rotidrotika Fandresena amin'ny nosy lahatra ny hiatrika ny sakany Open tsy voamariky ny olona. Platform, izay niditra tao amin'ny batery vanim-potoana mazava tsara, satria isika koa, hitily mpifaninana, tsy azo ekena ho mora mahazo. Hoe raha
, mpanao voalohany dia tena sarotra dia ny mahita ny alalan 'ny sisin' ny vanim-potoana mafy avy tampoka tezitra vanim-potoana, dia tsara tarehy atahorana. Dia ao an-tsaina, dia ny latabatra dia mihevitra fa ny fotoana mahery koa ao amin'ny miandalana endrika ankehitriny, Tsara ny mahazo rehefa mipoitra ny fahafahana fa ny mpanjifa no interchanged base mizana dia milamina. Mino aho fa misy ilaina mba hahitana tsara. Na dia izany aza, fa tsy be nanaraka ny fandikan-teny dia tezitra vanim-potoana.
, mpanao voalohany dia tena sarotra dia ny mahita ny alalan 'ny sisin' ny vanim-potoana mafy avy tampoka tezitra vanim-potoana, dia tsara tarehy atahorana. Dia ao an-tsaina, dia ny latabatra dia mihevitra fa ny fotoana mahery koa ao amin'ny miandalana endrika ankehitriny, Tsara ny mahazo rehefa mipoitra ny fahafahana fa ny mpanjifa no interchanged base mizana dia milamina.